Nayakhabar.com: फेसबुक लाइभ च्याटमा मोदीलाई नेपालबाट प्रश्नको ओइरो
फेसबुक लाइभ च्याटमा मोदीलाई नेपालबाट प्रश्नको ओइरो
नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिँदै अमेरिकामा भ्रमण गरिरहेका छन् ।
सानो छिमेकी देशले संविधान जारी गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकार सदुपयोग गर्दा हस्तक्षेप गर्न नपाएको झोंकमा आक्रोशित मोदी सरकार भने अहिले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य हुने दौडमा छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल आएर व्यवस्थापिका संसद्मा भाषण गरेर ‘असल छिमेकीका महान प्रधानमन्त्री’ बन्न खोजेका मोदी नेपालमा नाकाबन्दीसँगै नेपालीका नजरमा सबैभन्दा घृणित व्यक्तिमा परिणत भइसकेका छन् ।
नेपाली जनताले करिब ७० वर्षदेखिको अधुरो सपना पुरा गर्दा मोदी र उनको सरकारलाई असह्य भएपछि सातादेखि नेपालमा नाकाबन्दी गरेका छन् ।
नाकाबन्दीले नेपाल अस्तव्यस्त हुन लागेका बेला मोदी आइतबार विश्वमै सबैभन्दा धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको अमेरिकास्थित हेड क्वार्टरमा पुग्दैछन् ।
मोदीले फेसबुकको हेड क्वार्टर भ्रमण गर्ने जानकारी त्यसका मालिक मार्क जुकरबर्गले जानकारी दिइसकेका छन् ।
आफूले गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा मोदीलाई भेटेको जनाउँदै जुकरबर्ग यो पटक मोदीलाई आफ्नो कार्यालयमा स्वागत गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जुकरबर्गले फेसबुकमा पोस्ट् गरेको स्टाटसमा आइतबारै मोदीले उनका फेसबुक फ्यानहरुसँग लाइभ च्याट गर्ने भएका छन् ।
मोदीले जुकरबर्गसँगै रहेर प्यासिफिक समय अनुसार बिहान साढे नौ बजे (नेपाली समयअनुसार राति सबा १० बजे) बाट लाइभ च्याट शुरु गर्नेछन् ।
जुकरबर्गले प्रश्न सोध्नका लागि आफ्नो स्टाटसमा कमेन्ट गर्न अपिल गर्दै मोदीले ती प्रश्नको जबाफ लाइभ च्याटमार्फत दिने जनाएका छन् ।
मोदीले लाइभ च्याटबाट जबाफ दिने भएपछि नेपालबाट समेत अहिलेको नाकाबन्दीबारे फेसबुकका सयौं नेपाली प्रयोगकर्ताले प्रश्नको ओइरो नै लगाएका छन् ।
मोदीले संयुक्त राष्ट्र संघमा हुँदा पनि नेपालमा नाकाबन्दीबारे अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । यो अवस्थामा नेपालबाट गएका प्रश्नको उत्तर उनले दिने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
तर, फेसबुकका नेपाली प्रयोगकर्ताले लाइभ च्याटका लागि नेपालमा नाकाबन्दीबारे जुकरबर्गको पोस्ट्मा लगातार प्रश्न गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म ३८ हजार बढी प्रश्नको ओइरो लागिसेको अवस्थामा नेपालबाटमात्रै सयौं प्रश्न मोदीलाई सोधिएको छ । ती प्रश्नमा नेपाललाई आफ्नो राज्य नठान्न चेतावनी दिँदै तत्काल नाकाबन्दी खोल्न भनिएको छ । (यहाँ क्लिक गरेर मोदीलार्इ प्रश्न सोध्नुस्)
नेपालीहरुका प्रश्नको जबाफ मोदीले नदिएपनि कमेन्ट बक्सका ती प्रश्नले नेपालमाथि भारतीय ज्यादतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको छ ।
नेपालीले मोदीमाथि जुकरबर्गको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै नाकाबन्दीबारे सोधिएका प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यदि ध्यान दिए भने यो मुद्धामा भारतबाहेक तेस्रो विश्वको पनि नजर पर्ने अवस्था छ ।
मोदीलाई सोधिएका केही प्रश्न
मोदीलाई फेसबुकमा इश्वर नास्तिक शर्मा स्पेनबाट लेख्छन्, ‘मोदीजी नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दी तत्काल खुला गर । नेपालीले नयाँ संविधानको खुसी मनाइरहँदा ठूलो छिमेकीले हामीमाथि नाकाबन्दी गरिनु कुन् प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो ? कृपया नाकाबन्दी खोल्नुस् ।’
जुकरबर्गको पोस्टमा कमेन्ट गर्दै दिलनिशानी मगरले सोधका छन्, ‘नेपालीहरुले ७० वर्षदेखिको सपना पुरा गर्दै नयाँ संविधान बनाएर खुसीयाली मनाइरहँदा छिमेकीबाट भएको नाकाबन्दी सहन सकिन्न । नेपालमा केही पक्षको आवाज सम्बोधन हुन सकेको छैन । तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै नाकाबन्दी कहाँसम्मको जायज काम हो ?’
ज्ञानेन्द्र बोहराले फेसबुकमै मोदीमाथि कडा प्रश्न गरेका छन् । ‘भूपरिवेष्ठित छिमेकी देश नेपालमा नाकाबन्दी लाउन नमिल्ने बुझेर पनि मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाए’, उनले भनेका छन्, ‘मार्क उहाँलाई सोध्नुस्, ‘तपाईं नेपाललाई आफ्नो राज्य ठान्नुहुन्छ ? तपाईं अहिलेको २१ औं शताब्दीको नेता हो कि होइन ?’
अर्की फेसबुक युजर सिपोरा गुरुङ नेपालमा हस्तक्षेप नगर्न मोदीलाई भनेकी छन् । ‘नेपालमा हस्तक्षेप नगर । तिम्रो कारणले बिग्रेको अन्य छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउ ।’
सन नेपाली सर्कले एक सातादेखि नेपालमा जारी नाकाबन्दी खोल्न भनेका छन् । ‘नेपालले नयाँ संविधान ल्याएको रिसमा तपाईंले सबै सीमानाका अवरुद्ध पार्नुभएको छ । सेना प्रहरील गाएर नुन, पेट्रोलियम, खाद्यान्न र अन्य उयभोग्य सामानको आपूर्ति रोकिएको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीकारुपमा जिम्मेवारीपूर्वक यो नाकाबन्दी खोल्नुस् ।’अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।